Posted by လသာည at 2:28 AM6comments
ဒီနေ့.. ကျွန်မအတွက် ရင်မှာ နင့်သွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တယ်။
အိမ်က လာကြိုတာကို လမ်းဘေး လက်ဘက်ရည်ဆိုင်လေးကနေ စောင့်နေတုန်း ဆိုင်ထဲကို လူတစ်စု ထပ်ရောက်လာခဲ့တယ်။ တခြားစားပွဲကခုံတွေက လူအပြည့်ဆိုတော့ နေရာလွတ်ရှိတဲ့ ကျွန်မနားကို လာထိုင်လို့ ရလားလို့ လာမေးတာမို့ ထိုင်ပါလို့ ခွင်ပေးပြီး စားပွဲခုံ တဖက်စွန်းကို ကျွန်မ ရွှေ့ပေးခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ထဲမှာ အသက်ခုနှစ်ဆယ်ပတ်ဝန်းကျင်ခန့် အဖွားတစ်ယောက်ပါတယ်.
အဖွားက ကြက်သားပေါက်စီ ၂ လုံး စားချင်တယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒါနဲ့ အတူပါလာတဲ့ သက်လတ်ပိုင်းအရွယ် အမျိုးသားက စားပွဲထိုးကို ပေါက်စီနဲ့ လက်ဘက်ရည် ပေါ့ဆိမ့်တစ်ခွက် မှာတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေလည်း စားစရာ အသီးသီးမှာကြတယ်.။
အဖွားကို ကြည့်ရတာ မှတ်ညဏ် ချို့ယွင်းပြီး၊ နည်းနည်း သူငယ်ပြန်နေသလိုမျိုးပဲ။
လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ကို တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်လို အရာရာကို အထူးအဆန်းဖြစ်နေတဲ့ အမူအရာနဲ့ စကားတွေ ပြောနေ မေးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အတူတူပါလာတဲ့သူက အမေ လို့ ခေါ်နေသံကြားမိတော့ သားအမိဖြစ်မယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းသိရှိလိုက်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ မုန့်တွေနဲ့ လက်ဘက်ရည် ရောက်လာတယ်။ ဒီမှာတင် အဖွားက ပြောနေတဲ့ စကားကိုရပ်လိုက်ပြီး မုန့်အားလုံးကို ယူပြီး ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ သူ့လွယ်အိတ်ထည့်ကို အလျင်အမြန်ထည့်ပြီး ဖွက်လိုက်တာကို အံ့အားသင့်စွာ မြင်လိုက်ရပါတယ်။
အဖွားရဲ့ အပြုအမူကြောင့် သားဖြစ်သူက ဘေးနားကကျွန်မတို့ကို ရှက်ရွံသလို၊ လှမ်းကြည့်ရင်း
" အမေကလည်း ဘာတွေ လျှောက်လုပ်နေတာလဲ။ အဲလို မလုပ်ရဘူးလေ။ ပြန်ထုတ် ပြန်ထုတ်" တဲ့..
အဖွားက ပြန်မထုတ်ဘဲနဲ့ သူဘာမှ မလုပ်သလို တခြားအရာတွေ လျှောက်ကြည့်ပြီး မကြားသလို လုပ်နေပါတယ်။ ဒီတော့ သားက ချော့သလိုမျိုးနဲ့ အမေ ပြန်ထုတ် ပြန်ထုတ်နဲ့ တိုးတိုးလေး ထပ်ခါထပ်ခါ ပြောပါတယ်။
ဘယ်လိုပြောပြော အဖွားက မထုတ်တဲ့အဆုံးမှာ သားက စိတ်ဆိုးလာသလိုနဲ့ အသံ နည်းနည်း ကျယ်ကျယ် ငေါက်သံပါပါနဲ့
"အမေ အိတ်ထဲက မုန့်ကို ပြန်ထုတ်လိုက်၊ ဒီမှာ စားရအောင် ထုတ်လိုက်၊ အခု ထုတ်လိုက်"
ဒီတော့မှ အဖွားက ကြောက်ရွံတဲ့အမူအရာလေးနဲ့ ပြန်ပြောတာက..။
" စိတ်မဆိုးပါနဲ့ ဆိုင်ရှင်ကြီးရယ်.. ကျွန်မသားကလေ ကြက်သားပေါက်စီ သိပ်ကြိုက်လို့ ဒီရောက်တုန်း သားစားဖို့ ယူသွားချင်လို့ပါ.. စိတ်မဆိုးပါနဲ့ နော်.. နော်. " တဲ့..
အဖွားစကားအဆုံး သားဆိုသူက မျက်ရည်တွေ ၀ဲသွားတာကို အသေအချာ မြင်လိုက်ရသလို..
ကျွန်မလည်း... ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံးဆို့နင့်ပြီး အသက်ရှူ ရပ်သွားသလိုပဲ။ —
Posted by လသာည Labels: အမေ at 7:44 PM 8 comments
ကိုယ်ဝန် ၅ လမှာ နာကျင်လွန်းတဲ့ ကျောရိုးစစ်ကြောင့် လမ်းလျှောက်ရင်းက လဲကျခဲ့တယ်။ ဆေးရုံသွားပြတဲ့အခါ အရိုးကင်ဆာလို့ ထင်ရတဲ့ ရောဂါတစ်ခုကို သံသယ ဖြစ်စရာ တွေ့ခဲ့ရတယ်.. ။ ဖြစ်နိုင်သ၍ မြန်မြန် ကုသမှသာ ရောဂါပျောက်ကင်းမှာဖြစ်လို့ ဖြစ်နိုင်သ၍ အမြန်ဆုံး.... ရောဂါစတင်ကုဖို့ ဆရာဝန်ကတိုက်တွန်းခဲ့တယ်။ ။
ဒီတော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်က အရေးတကြီး ပြန်မေးလိုက်တယ်။
"ဒါဆို ဗိုက်ထဲက ကိုယ်ဝန်ကရော…"
"ဆေးစကုပြီဆိုတာနဲ့ ကင်ဆာဆေးတွေကြောင့် ဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်အရ ကိုယ်ဝန်ကိုတော့ လက်လျှော့လိုက်ပါ။"
"ကျွန်မ ဒီကလေးကို မွေးမှဖြစ်မယ်။ ကျွန်မ မစွန့်လွှတ်နိုင်ဘူး။ ရောဂါကတော့ ကလေးမွေးပြီး မှ ကုပါရစေ။ ကိုယ်ဝန်ကိုသာ ဂရုစိုက်ပေးပါ။"
ဒီလိုနဲ့ သမီးကို ပိုချစ်ခဲ့တယ်..။
အောင်မြင်စွာ သမီးကို မီးဖွားခဲ့တယ်။ သမီးကို ဘေးမသီရန်မခ မွေးနိုင်လို့ ၀မ်းသာပြီး၊ ကျောရိုးဆစ်က နာကျင်မှုကိုတောင် မိခင်ဖြစ်သူ မေ့သွားတယ်..။ သမီးဟာ မိခင်ဖြစ်သူအတွက်တော့ မသေခင်ပေးတဲ့ ဘုရားရဲ့ဆု ပါပဲ။
ရောဂါကြောင့် သမီးကို မချီ ပိုးနိုင်ပေမယ့် သမီးမျက်နှာလေး မြင်ရတာနဲ့ကို မိခင်ဖြစ်သူ ကျေးဇူးတင်နေပါပြီ။
အလျင်အမြန်ကုရမယ့် ရောဂါက ချက်ချင်း မကုသနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ကျောရိုးတစ်လျောက်မှာ ကင်ဆာကျိတ်တွေ အခိုင်အမာ အမြစ်တွယ်နေခဲ့ပြီ။ မိခင်ဖြစ်သူ လူ့လောကကို ခွဲခွာဖို့ အချိန်တွေ နီးကပ်လာပြီ.။ သမီးလေးအတွက် တစ်ခုခု လုပ်ခဲ့မှ ရတော့မယ် လို့ သူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
"သမီးYurichika အတွက် မှာတမ်း"
သမီး ရယ်သံလေးတွေက မေမေ့အတွက် ဘုရားပေးတဲ့လက်ဆောင်ပါ..။ မေမေ့ကို ပျော်ရွှင်စေတဲ့ လက်ဆောင်ပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလက်ဆောင်ကို ဘယ်အချိန်ထိ မေမေပိုင်ဆိုင်နိုင်မလဲဆိုတာကို မသိတော့တဲ့အခြေအနေတစ်ခု ရှိနေတယ်။ ဒါကြောင့် သမီးလေးကို မှာချင် ပြောချင်တာတွေကို စာတွေ ရေးထားခဲ့တယ်..။
သမီး လူဆိုတော့လည်း တချိန်ချိန်တော့ သေချာပေါက် စိတ်ညစ်စရာတွေ တွေ့လာဦးမှာ။ မေမေ အနားမှာ နေပေးချင်လိုက်တာ။ မနေပေးနိုင်ပေမယ့်လည်း မေမေက နည်းလမ်းပေးမယ်။ လောကမှာ သေတာလောက် စိတ်ညစ်စရာ ကောင်းတာ ရှိဦးမှာလား။ လုပ်ချင်တာ ဘာမှ လုပ်လို့မရတော့ဘူး။ ဒီတော့ ရှင်သန်နေတဲ့ လူတွေအတွက် ကျန်တဲ့ စိတ်ညစ်စရာဆိုတာ အသေးအမွှား ဟာသလောက်ပဲလေ။ ဟုတ်တယ်မို့လား။ စိတ်ညစ်ရင် အားရပါးရ ရယ်သာပစ်လိုက်။
သမီးမှာ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေလည်း အများကြီး ရှိစေချင်တယ်။ သူငယ်ချင်းကောင်းရဖို့ သမီးကိုယ်တိုင်က သူများတွေအတွက် သူငယ်ချင်းကောင်းဖြစ်အောင် ပြုမူရမယ်။ လူဆိုတာက မွေးလာတော့လည်း တစ်ယောက်တည်း၊ သေသွားလည်း တစ်ယောက်တည်း.. ။ အထီးကျန်စရာ မဟုတ်လား။ ဒီတော့ ရှင်သန်နေတုန်း ဘ၀လေးမှာ ပတ်ဝန်ကျင်က လူများစွာနဲ့ ပြေလည်အောင် ဆက်ဆံပြီး မိတ်ဆွေကောင်း များများရအောင် မိတ်ဖွဲ့နေထိုင်တာက သဘာဝအကျဆုံး မဟုတ်လား။
နောက်ပြီးတော့ စိတ်ထားကောင်းကောင်းထားတတ်ရမယ်။ အကောင်းမြင်စိတ်တွေ တွေးတဲ့အကျင့် မွေးမြူရမယ်။ အရေးကြီးဆုံး အချက်က ဟောဒီလောကကြီးမှာ သမီးက ကိုယ်ပွားမရှိတဲ့ ပန်းပွင့်တပွင့်ဆိုတာ မမေ့ဖို့ပဲ။ သမီးဟာ သမီးပဲမို့ ဘယ်သူငယ်ချင်းနဲ့မှကိုယ့်နဲ့ မနှိုင်းယှဉ်မိစေနဲ့။.
ဘုရားက မိန်းခလေးတွေကို လှလှပပ နေခွင့်ပေးထားတယ်။ နေ့စဉ် ကျော့ကျော့မော့မော့လေး နေထိုင်ဖို့ဆိုရင် လုပ်စရာတွေ အများကြီးဆိုတော့ သမီးပျင်းချိန်တောင် မရပါဘူး။ ။
မေမေ့ မျက်စိထဲတော့ သမီးက ဘုရင်သမီးတော်လေးလိုမျိုး၊ အားလုံး ငေးနေတဲ့ မင်းသမီးလေးတစ်ပါးပေါ့၊ မေမေကိုယ်တိုင် အလှပြင်ဆိုင်တွေ လိုက်ပို့၊ ရှော့ပင်းတွေ လိုက်ပို့ လုပ်ပေးချင်လိုက်တာ…။ နေ့တိုင်း ဒီဇိုင်း တမျိုးစီ မထပ်အောင် ပေးဆင်ပြီး မေမေက သမီးရဲ့ ဒီဇိုင်နာ လုပ်ချင်တာ။ ဖေဖေ့ကိုလည်း မေမေပြောခဲ့တယ်။ သမီးမိန်းခလေး မွေးထားတာဆိုတော့ ပိုက်ဆံတော့ ပိုရှာပြီး ပိုဆင်ပါလို့..။ လိုအပ်ရင် မေမေ့ လက်ဝတ်ရတနာ အားလုံး ယူဝတ်နော်။
သမီးရယ်.. သမီးကို နောက်ထပ်မှာစရာတွေ အများကြီး ရှိသေးတယ်။ သမီးကို စိတ်မချဘူး။
ဘုရားသခင် ကျွန်မကို အသက် တစ်ရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်လပဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်ရှင်ခွင့်ပေးပါဦး…။
အဲဒီ နိုင်ငံမှာ တစ်နှစ်ကို လူပေါင်း သုံးသောင်းခွဲလောက်က စိတ်ဖိအားတွေ များလွန်းလို့ ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ် သတ်သေနေတဲ့အချိန်မှာ မိန်းမတစ်ယောက်ကတော့ သူ့အသက်ကို တစ်ရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်လပဲဖြစ်ဖြစ် သမီးအတွက် ဆက်ရှင်ခွင့် ရပါစေ..လို့ တဖွဖွ ရေရွတ်ရင်း သမီးအတွက် အသက်ပေးသွားခဲ့တယ်။ သူရေးခဲ့တဲ့ "သမီးYurichika အတွက် မှာတမ်း" စာအုပ်လေးကတော့ ရောင်းမလောက်နှိုင်ပဲ အကြိမ်ကြိမ် ထုတ်ဝေလို့ ဂျပန်ပြည်သူတွေရဲ့ အသည်းနှလုံးကို ကိုင်လှုပ်သွားခဲ့လေရဲ့...။
Posted by လသာည Labels: ၀တ္ထုတို at 3:50 PM7comments
ကျွန်မ့သူငယ်ချင်းတွေက လသာညရယ်.. ဒါတွေထပ်နေပြီလေလို့ ပြောလည်း ခံရမှာပါး)) ဒါပေမယ့် ကျွန်မအတွက်တော့ လေ့လာလို့ကို မကုန်သေးဘူးရယ်။ ဟုတ်တယ်လေ.. သဘာဝလူ့လောကကြီးထဲမှာ ၂မျိုးထဲသာ ရှိတဲ့ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ကွာခြားချက်တွေကို ရှေးယခင်ကစပြီး ယခုအထိ အများကြီး စိတ်ဝင်တစား လေ့လာကြ ၊ သုတေသနလုပ်ကြဆိုတော့ လသာညလည်း လေ့လာလို့ မဆုံးနိုင်ပေါ့။
ခန္ဓာကိုယ် ကွာခြားတာတော့ လူတိုင်း သိပြီးသား.ပါ.။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုကွာခြားချက်တွေကြောင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းရည်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကွဲပြားရတာတွေကို ရှေးက လူတွေ သိပ်မသိခဲ့ဘူး။ အမျိုးသား အမျိုးသမီး တန်းတူအခွင့်အရေးရလိုမှု ဆိုတာတွေ ရှိသလို၊ အမျိုးသားများက အားကြီးသူမို့ အားနွဲ့သူ အမျိုးသမီးများကို ငဲ့ညှာပါလို့ တောင်းဆိုမှုတွေလည်း ရှိတယ်။
ဒီအတွက် အခွင့်အရေးတူသင့်တဲ့နေရာမှာ တူပေးပါဆိုတော့ မတူတဲ့အချက်တွေ ထောက်ပြလို့ ပြဿနာတွေဖြစ်ရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ငဲ့ညှာပေးဖို့ တောင်းဆိုတော့လည်း တဖက်သတ် အနိုင်ကျင့်ဖိနှိပ်မှုတွေ ဖြစ်ရပြန်တယ်။ ဒီမတူကွဲပြားမှုတွေ အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပညာရှင်တွေကလည်း ကြိုးစားလေ့လာ သုတေသနပြုခဲ့ကြတယ်။ (အခုလည်း လေ့လာနေဆဲပါပဲ..။) အဲ့ဒီအထဲမှာ စိတ်ပညာရှင်တွေလည်း ပါပါတယ်။
စိတ်ပညာရှင်တွေ လေ့လာတာကတော့ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံတွေ မတူတာကြောင့် စွမ်းရည်တွေ မတူကွဲပြားရပုံတွေအပြင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ ကွဲပြားရပုံတွေကို အဓိကထား လေ့လာကြပါတယ်။ ဒါတွေကို နားလည်ထားခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်နဲ့ (လိင်)အမျိုးအစား မတူတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေ၊ ကိုယ့်ရည်းစား၊ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက် စသည်တို့ကို နားလည်ပေးနိုင်လာမယ်လို့ ယုံကြည်မိတယ်။
အခုလည်း ပညာရှင် Amber Hensleyက စုစည်းတင်ပြထားတဲ့ မိန်းမနဲ့ ယောက်ျားရဲ့ မတူတဲ့ ဦးနှောက်စွမ်းရည်တွေအကြောင်း ယေဘုယျအချက်ကြီး ၁၀ချက်က တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာမို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
မှတ်စုကို ပြန်မျှတာမို့ စာသားနည်းနည်းဆန်ရင် ခွင့်လွှတ်ပါနော်.. ။
နာကျင်ခံစားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း အမျိုးသမီးနဲ့ အမျိုးသားကွဲပြားပါတယ်။ လေ့လာချက်တွေအရ နာကျင်မှုခံစားချက်တွေ လျော့နည်းစေဖို့အတွက် အမျိုးသမီးများဟာ အမျိုးသားများထက် မော်ဖင်းဓါတ် (morphine) ပိုလိုအပ်တယ်လို့ တွေ့ရပါတယ်။ နာကျင်နေစဉ် ဖြစ်တည်တဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအပိုင်းကို amygdalaလို့ ခေါ်ပါတယ်။
ပုံမှာ တွေ့တဲ့အတိုင်း အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများက amygdala အပိုင်းပိုများတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးများက နာကျင်မှုကို ပိုခံစားရကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ (ပုံကို ဒီနေရာက ယူပါတယ်)
၂။ ဦးနှောက်ခြမ်းအလုပ်လုပ်ပုံ ကွဲပြားခြင်း
အမျိုးသမီးများက ဦးနှောက်ရဲ့ လက်ဝဲဘက်ခြမ်းရော၊ လက်ယာဘက်ခြမ်းရော အလုပ်လုပ်ပေမယ့် အမျိုးသားများဟာ လက်ဝဲဘက် ဦးနှောက်ခြမ်းက ပိုအလုပ်လုပ်သူများဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြဿနာ ဖြေရှင်းပုံ မတူတာဖြစ်ပါတယ်။ (ဒါကတော့ အရင်က (ဒီနေရာမှာ အကျယ်)ရေးပြီးသားမို့ ထပ်မရေးတော့ဘူးရယ်)
၃။ ဦးနှောက်ရဲ့ အရွယ်အစား.
အမျိုးသားဦးနှောက်က အမျိုးသမီးဦးနှောက်ထက် ၁၁-၁၂% ပိုကြီးပါတယ်။ ဦးနှောက်အတွင်း ဆဲလ်ကလည်း ၄%ပိုများပြီး ဦးနှောက်တစ်သျှူး ၁၀၀ ဂရမ်ခန့် ပိုများပါတယ်။ အရွယ်အစားကြီးခြင်းဟာ ဥာဏ်ရည်ကိုတော့ ထူးပြီး အကျိုးမသက်ရောက်စေပါဘူးတဲ့.. (အဟိ စကားနိုင်လုလိုသူများး)) ။ အမျိုးသားတွေဟာ ကြွက်သားပမာဏပိုများရခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ပို ကြီးထွားခြင်းကြောင့် neuronတွေကို ပိုထိန်းချူပ်ဖို့ လိုအပ်ခြင်းကြောင့်သာ ဦးနှောက်အရွယ်အစားပို ကြီးရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အသေးစိတ်ဖတ်လို့ ရပါတယ်။
၄။ သချာင်္စွမ်းရည် နှင့် ဘာသာစကား
ဦးနှောက်ရဲ့ (inferior-parietal lobule (IPL))ဟာ အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ၁၀ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော် ကြီးပါတယ်။ အတိအကျပြောရရင် လက်ဝဲဘက်ခြမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခြမ်းဟာ သချာင်္စွမ်းရည်ကို ထိန်းချုပ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ တစ်ခုကို ပြောပြရရင် ပညာရှင်ကြီး အိုင်စတိုင်းရဲ့ IPLဟာ ပုံမှန်ထက် အများကြီးကြီးမားတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးများကတော့ အမျိုးသားများထက် လက်ယာဘက်ခြမ်းပိုပါတဲ့အတွက်အသေးစိတ် အာရုံခံစားချက်များကို ပိုသိစေပါတယ်။ ဥပမာ.. ညလည်ခေါင် ကလေးငိုသံ သဲ့သဲ့ကအစ ကြားနိုင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ဘာသာစကားနဲ့ ပတ်သက်ရင် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဟာ အမျိုးသမီးများမှာ အားသာပါတယ်။ စကားပရိယာယ် ကြွယ်ဝပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အမျိုးသားများမှ လက်ဝဲဦးနှောက်တခြမ်းပဲ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အတွက် ဘာသာစကားပြောနိုင်တဲ့ အပိုင်းအားနည်းနေပြီး အမျိုးသမီးများကတော့ လက်ဝဲရော လက်ယာရော နှစ်ခြမ်းရှိတဲ့အတွက် စကားပရိယာယ်ကြွယ်ဝနေစေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိချင်ရင် ဒီနေရာကို ညွှန်းပါတယ်။
၅။ အများနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး
သာမန်အားဖြင့် အမျိုးသမီးများဟာ အမျိုးသားများထက် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းပါတယ်။ အုပ်စုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြဿနာတစ်ခုကို စကားပရိယာယ်နဲ့ ဖြေရှင်းတတ်တယ်။ စကားလုံးမဲ့ အမူအရာတွေ၊ စကားသံအနိမ့်အမြင့်တွေ၊ မျက်ရိပ်မျက်ကဲဖြင့် ခံစားနားလည်မှု၊ စာနာ နားလည်ပေးမှုတွေ စသည်တို့ကို လုပ်နိုင်တယ်။
ဒီအချိန်မှာ အမျိုးသားများကတော့ ပေါ်လာတဲ့ ပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ဖို့ပဲ တွေးချင်တယ်။ ဓါးချင်းသာ ယှဉ်ပစ်လိုက်ချင်တယ်၊ စကားအကျယ်ချဲ သိပ်မပြောချင်ဘူး။ စိတ်ကူးရရင် ချက်ချင်း လက်တွေ့အကောင်အထည် ဖော်လိုက်ချင်တယ်။ စကားလည်း ပုံမှန်အားဖြင့်နည်းတယ်။ အုပ်စုနဲ့ အမြဲတရုန်းရုန်း နေလိုစိတ် သိပ်မရှိဘူး..။ ဒါကြောင့် ယောက်ျားအချင်းချင်း မိန်းမအချင်းချင်း ခင်မင်မိတ်ဖွဲ့ပုံက ဘယ်လိုမှ မတူနိုင်ဘူး။
၆။ စိတ်တင်းအား (stress)ကို တုန့်ပြန်ပုံ
စိတ်ဖိအား၊ တင်းအားတွေများလာရင် အမျိုးသားများက အခြေအနေတစ်ခုကို "fight or flight" နဲ့ တုန့်ပြန်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးများကတော့ ၎င်းအခြေအနေကို ချဉ်းကပ်ပြီး ကြင်နာစွာ ဖြေရှင်းဖို့၊ ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံပေးဖို့ ကြိုးစားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စိတ်ပညာရှင် Shelley E. Taylorက အဲဒါကို tend and befriend"လို့ ခေါ်ပါတယ်။ မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ မိမိသားသမီးများကို ကြင်နာစွာဆက်ဆံပေးခြင်း၊ မိမိ၏ အပေါင်းအသင်းများကို ရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံလိုက်ခြင်းစသည်တို့ဖြင့် မိမိ စိတ်ဖိအားတင်းကျပ်မှုကို ဖြေရှင်းကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၇။ oxytocin ဟိုမုန်း ထုတ်လွှင်မှု အနည်းအများ ကွဲပြားမှု
ဒီလို အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးကွဲပြားတဲ့ ပြုမှုပုံဟာ ဟိုမုန်းပေါ်မှာလည်း အခြေခံပါတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ stress ရှိချိန်မှာ oxytocinဆိုတဲ့ ဟိုမုန်းကို ထုတ်လွှင့်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးများမှာ တွေ့ရတဲ့ estrogen ဟိုမုန်းဟာ oxytocinကို ပိုများစေပြီး သူ့ရလာဒ်က စိတ်ကို တည်ငြိမ်စေတယ်။ မိခင်စိတ်ကို ပိုဖြစ်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အမျိုးသားများမှာ တွေ့ရတဲ့ testosterone ကတော့ stress များချိန်မှာ အများဆုံးထုတ်လွှင့်တတ်ပြီး oxytocin ဟိုမုန်းအားကို လျော့ကျစေပါတယ်။ တည်ငြိမ်ခြင်း ကို အားမပေးနိုင်တော့ပါ။ ဒါကြောင့်လည်း အမျိုးသားများ စိတ်ဖိအားခံရလွန်းရင် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပေါက်ကွဲလွယ်တတ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (အသေးစိတ်သိလိုလျှင် ဒီနေရာမှာ သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။)
၈။ ဦးနှောက်ကြီးရဲ့ အတွင်းပိုင်း ကွဲပြားမှုကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားမှုကွဲပြားခြင်း
ဦးနှောက်ကြီးရဲ့ အတွင်းပိုင်းမှာ limbic systemဆိုတာ ပုံမှာ မြင်ရတာကို ခေါ်တာပါ။
ယေဘုယျအားဖြင့် အမျိုးသမီးများမှာ limbic system ပိုနက်ရှိုင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်သလို၊ ခံစားရတာကိုလည်း ဖော်ပြနိုင်စွမ်းပိုရှိတယ်။ ဒီစွမ်းရည်ကြောင့်လည်း ကလေးငယ်အတွက် ပြုစုစောင့်ရှောက်ရာမှာ ကလေးရဲ့ ခံစားချက်ကို လက်ခံနားလည်ပေးနိုင်စွမ်း ပိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးမားပြီး နက်ရှိုင်းတဲ့ limbic systemကြောင့် ကလေးကိုယ်ဝန်ရှိနေစဉ်၊ ကလေးကိုယ်ဝန်မွေးဖွားပြီးချိန် (နောက်ပြီး လစဉ် ရာသီလာချိန်)တွေမှာ depression ၀င်စေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၉။ အမြင်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်သောစွမ်းရည် (spatial ability)
အမျိုးသားများဟာ အမျိုးသမီးများထက် အထက်ပါစွမ်းရည်ကောင်းပါတယ်။ spatial IQ လို့လည်း ခေါ်တယ်။ အမြင်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်သောစွမ်းရည်ဆိုတာ မိမိမြင်ရသော ပုံများ အရာဝတ္တုများကို ထောင့်အမျိုးမျိုးမှ အမြင်အမျိုးမျိုးကို (အတွေးဖြင့်) လှည့်၍ မြင်နိုင်စွမ်း၊ ပိုသေချာအောင် ဖြည့်စွက်ပြောရရင်3D ၊2D စတဲ့ အမြင်တွေနဲ့ ထောင့်စုံ မြင်နိုင်စွမ်းကို ဆိုပါတယ်။ ဒီစွမ်းရည်မြင့်သူများဟာ လမ်းမြေပုံတွေကို အလွယ်မှတ်မိတယ်။ (အရင်က မြေပုံမကြည့်တတ်သော မိန်းမဆိုပြီး (ဒီနေရာမှာ) ပိုစ်ရေးခဲ့ဖူးသေးတယ်)။ လေ့လာချက်များအရ ဒီစွမ်းရည်ဟာ ကလေး ၅ လကစပြီး မြင်သာလာတယ်လို့ ဆိုပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအများကြီး ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်.. (စကားမစပ်.. လသာညရဲ့ Thesis က ဒီစွမ်းရည်နဲ့ ပတ်သက်နေတယ်။ ဒါကြောင့် တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါ သူငယ်ချင်းတွေကို ဒီစွမ်း၇ည်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ IQ မေးခွန်းလွှာလေးတွေ မေးချင်သေးတယ်၊ ဖြေကြည့်မလားဟင်း))
၁၀။ စိတ်ကစင့်ကလျားဖြစ်မှုအလားအလာ ကွဲပြားခြင်း
ဦးနှောက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေ၊ ဖွဲ့စည်းပုံတွေ မတူတာကြောင့် စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ စိတ်ပူပန်မှုများခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ စိတ်ကစင့်ကလျားဖြစ်မှု အခြေအနေလည်း မတူပါဘူး..။ စိတ်ကစင့်ကလျားဖြစ်တဲ့အခါ အမျိုးသားများဟာ ဘာသာစကားဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ ( နှုတ်ထစ်၊ ဆွံအသွားတာမျိုး) ပို ဖြစ်တတ်ပြီး အမျိုးသမီးများကတော့ စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာတစ်ခုကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ပြီး တစ်ယောက်တည်း စကားပြောနေတတ်တာမျိုး အဖြစ်များပါတယ်။ ဒီထက်ပိုဆိုးရင် ဖြစ်နိုင်တဲ့ စိတ်ရောဂါတွေအကြောင်းတော့ လသာည အသေးစိတ်မသိတာမို့ မရှင်းတော့ပါ။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုလိုသူများ ဒီနေရာက စာအုပ်ကို ဖတ်ဖို့ ညွှန်းဆိုပါရစေ..။
ဟိဟိ.. ကဲ .. ဖတ်ရတာ ပျင်းသွားပြီလား.. ။ အပျင်းကို မျှဝေခံစားပေးသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။
Posted by လသာည Labels: updated, စိတ်ပညာ at 11:55 AM 1 comments